Ukukhangela iZithuba zeBlog ngeTechnorati | Martech Zone
Lwesine, Disemba 28, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
I-Technorati sisixhobo esimnandi- kodwa andiqinisekanga ukuba zonke iimpawu zayo zithengiswa kangakanani. Olunye lweempawu endizithandayo kukukwazi ukukhangela zonke iiblogi zeethegi ezithile. Ndide ndibhalisele kolunye uphando.
yiya http://www.technorati.com/tag kwaye unokufumana iithegi eziphezulu kule yure OKANYE ungafaka amagama ophando. Isiphumo URL izakujongeka ngoluhlobo: http://www.technorati.com/posts/tag/adobe+apollo (ukuba ukhangela iapile apollo).
Ukuba uqaphela, ungabhalisela oko uShishino Yondla ngoku! Sebenzisa umfundi wesondlo njengoku Google Reader, ungafumana uninzi lweebhlog zamva nje ze- "Adobe Apollo" okanye nasiphi na isihloko onokuthi xa usiposile! Luhlobo lokuthanda ukuseta isilumkiso kuyo yonke i-blogosphere.
Olunye usetyenziso loku kukukhangela isihloko phambi ukubhloga malunga nayo. Oku kunokubonelela umxholo wakho kunye nezalathiso ezomeleleyo kunye trackBacks!
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2006 ngo-3: 10 PM
Enkosi ngamazwi anobubele. Ndiyavuya uyayithanda kwaye ndiyabulela ngokwazisa abanye.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-11: 01 AM
Heh, NDISEKHO ukuyifumana iTechnorati yokuhlaziya ibhlog yam! Kudala ndibabetha NGEMIHLA ~! Ngokumalunga nenkxaso yetekhnoloji, akukho nto isilelayo njengempumelelo:
"Ukuba awuphenduli kwamntu ngeveki, nceda wamkele uxolo lwethu ngolibaziseko kuba sinokuba semva kwinkxaso."
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-11: 12 AM
Xa oko kwenzekile kum, ndilahlekelwe ziimbali ezimbalwa ngembali kunye neTechnorati. Kuthathe ixesha, kodwa ekugqibeleni bayilungisa. Andikwazi ukucinga ukuba zonke iiblogi eziza kwenzeka kwaye kufuneka zithathe ixesha elingakanani ukuzilungisa. Ndizamile nokucima ibhlog yam kubo kwaye ndiqala… ayisebenzi. Babonakala ngathi basebenzisa indlela ethile yokugcina i-caching.
Linda. Ndiqinisekile bazoyilungisa!
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-11: 17 AM
Ewe, nam. Mhlawumbi kukhula iintlungu. INkosi iyazi ukuba ndinengxaki yoLwazi oluKhulu!
[Ubuchopho… buhlungu… kufuneka… itshokholethi!]
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-12: 54 PM
Vince, uxolo kuba bekufuneka usifikelele ngebhlog kaDoug, kodwa ndiyifumene ingxaki kuqwalaselo lwebhlog yakho kwinkqubo yethu, sayilungisa, savelisa iping entsha, kwaye ngoku ndiyabona iiposti zakho zamva nje kwisalathiso sethu.
Kwakhona, uxolo ngalonto. UDorion
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-1: 31 PM
Wowu! Njani ngaloo nto!
Enkosi, Dorion !!!
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-1: 37 PM
Thetha ngempembelelo kunye nokuzenzekelayo! Ngoku, yeyiphi i-Cialdini priniminles eyayiqhuba le?
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-8: 50 PM
Masithi nje yayingabantu, bethetha nabantu, kunye ne-imeyile encinci (ezenzekelayo ngezimvo zebhlog).
Ngaba oko kubalulekile? dc
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-9: 15 PM
Ngokuqinisekileyo, ukuba ubandakanya ububele, ulwazi kunye nokucinga.